UMongameli weYunivesithi yaseHodges, uGqirha John Meyer, Uyakwamkela!
Funda ukuba kutheni iYunivesithi yaseHodges yiDyunivesithi eyahlukileyo kuMazantsi mpuma eFlorida
Dibana noGqirha Meyer kunye neYunivesithi yaseHodges
Njengokuba ingeyiyo i-alumnus kuphela yeYunivesithi yaseHodges kodwa kunye nomongameli wayo, ndiziva ndifanelekile ukuba ndinamkele kweli ziko lihle kangaka. Siliziko eligunyazisiweyo lommandla, labucala, elingenzi nzuzo, elasekwa ngonyaka we-1990 kwaye ngokuziqhenya sikhonza uMzantsi-mpuma weFlorida ukusukela oko. Iyunivesithi yethu iye yanda ukuhlangabezana neemfuno zoluntu lwethu-kwihlabathi elisingqongileyo- kunye neekhampasi kuzo zombini iFort Myers naseNaples, eFlorida, kunye nokufikelela kwimfundo kubandakanya kungekuphela nje imfundo yemveli ekhampasi kodwa nezifundo kunye neenkqubo ezikwi-Intanethi.
Umsebenzi wethu kukulungiselela abafundi ukuba basebenzise imfundo ephezulu kwimisebenzi yabo yobuqu, yobungcali kunye neyasekuhlaleni.
Indawo engenakuthelekiswa nanto yeYunivesithi yaseHodges
IYunivesithi yaseHodges ibonelela ngendawo yokufunda ngokungafaniyo naliphi na elinye iziko elikuloo ngingqi ngokunikela:
isatifikethi, umhlobo, isidanga kunye neenkqubo zesidanga semasters;
iishedyuli eziguqukayo zemini, zangokuhlwa, ezihlanganisiweyo kunye neeklasi ezikwi-Intanethi;
Izifundo ezifundiswe ngoonjingalwazi abakhoyo ngoku okanye ababesebenza ngaphambili kwicandelo labo; kwaye
Inkqubo eyilelwe ukunceda abafundi ukuba basebenzise oko bakufundileyo emsebenzini.
Ukongeza, uninzi lweenkqubo zethu zinceda abafundi bethu ukuba bafumane iziqinisekiso zobungcali kwiindawo ezinjengokonga, ubalo-mali loluntu, kunye neengcebiso ngempilo yengqondo. Abanye bakhokelela kukuqinisekiswa kweshishini. Amagqala omkhosi, amalungu enkonzo esebenzayo, kunye neentsapho zabo banokufumana uncedo kwiinjongo zabo zemfundo ngoGqirha uPeter Thomas weVeterans Centre yethu.
IYunivesithi yaseHodges ikwabonelela ngesiNgesi esigqibeleleyo nesibanzi njengenkqubo yoLwimi lwesiBini (ESL) enikezela ukuntywiliselwa kulwimi lwesiNgesi kwizithethi ezingezizo ezomthonyama zesiNgesi ezifuna ukwandisa ukutyibilika kwazo. Ngaphezulu kwamazwe angama-25 ahlukeneyo amelwe ngokubanzi phakathi kwabafundi bethu be-ESL.
Ukubandakanyeka kweYunivesithi yaseHodges njengesixhobo soLuntu
Okokugqibela, siyimpahla ebalulekileyo kumazantsi mpuma eFlorida, siphendula njengendawo yokufikelela kwimfundo ephezulu yabafundi kwaye njengamaqabane kuphuhliso olubanzi lwezoqoqosho nezentlalo. Siyazingca ngendima yethu kolu luntu luhle kangaka, kwaye silujonga nzulu uxanduva olusisiphumo. Kunye nokuzibophelela kwethu okuqhubekayo ekuncedeni ukubonelela abasebenzi abanezakhono nabaneziqinisekiso ezifanelekileyo kubasebenzi bendawo abakhulayo, siqhubeka ngokufuna ukuchonga ezinye iindlela iziko lethu elinokusebenzela uMazantsi mpuma eFlorida.
Ndiyakumema ukuba uphonononge yonke iYunivesithi yaseHodges ekufuneka ikunike kwaye uzibonele ngokwakho oko kusenza sahluke kwamanye amaziko emfundo aphakamileyo. Ndiyakholelwa ukuba uyakuchukumiseka yile nto iyunivesithi.
UJohn D. Meyer, DBA
Umsebenzi weYunivesithi yaseHodges, umbono, kunye neentsika
IYunivesithi yaseHodges-iziko labucala elingenzi nzuzo-lilungiselela abafundi ukuba baphakamise imfundo ephezulu kwimisebenzi yabo yobuqu, yobungcali kunye neyasekuhlaleni.
IYunivesithi yaseHodges iyakwamkelwa ngokugqwesa kwimfundo ebandakanya wonke umntu kunye nokuzibandakanya koluntu.
Qhubeka uphucula ipotifoliyo yemveliso yeHodges ukuhlangabezana neemfuno zoluntu kunye nomqeshi.
Kwiinkqubo zezifundo, khulisa amathuba okubhaliswa kwabafundi, ukugcinwa, ukuthweswa isidanga kunye nengqesho.
Kwiinkqubo ezingezizo ezemfundo, sebenzela iimfuno zoluntu kunye nomdla wabathathi-nxaxheba.
Ukuphuhliswa kweenkqubo ezintsha zeemfuno ezingafezekiswanga, ezisakhulayo kunye nezexesha elizayo kwiindawo esihlala kuzo, ukuze kuzuze abaqeshi bengingqi kunye nabafundi bethu.
Beka iinkqubo zokuphumla okanye zokuthatha umhlala-phantsi ezingasazifezekisiyo iinjongo zamaziko kunye noluntu.
Ukutsala nokugcina abasebenzi abaqeqeshiweyo, abohlukeneyo kunye nokwandisa ifuthe elihle labasebenzi.
Ukuphumeza iinkqubo zokuphucula ezonyusa ukusebenza ngokukuko kunye nokuphucula umgangatho wenkonzo kubafundi nakwabanye abathathi-nxaxheba.
Ukugxila kwimizamo yezemali yeziko.
Ngokukhawuleza sabelane ngebali leYunivesithi yaseHodges kunye nabafundi, i-faculty kunye nabasebenzi, abafundi be-Dyunivesithi, nabahlali beYunivesithi, kunye noluntu lwethu, kwaye siphumeze amanyathelo-rhoqo ngokusebenzisana nabachaphazelekayo-abakhonza uluntu lwethu.
Ukuphuhlisa iindlela ezintsha zokunxibelelana noluntu ngokubanzi ukuze amava eYunivesithi yaseHodges abanzi, enzulu, kwaye afaneleke ngakumbi.
Qaphela amathuba endawo kunye noxanduva olukhoyo kuMazantsi mpuma eFlorida, ilizwe laseFlorida, nakwingingqi yethu.
Ukomeleza uthungelwano lweHodges lwabantu kunye namaziko ukwandisa inqanaba leziko lempembelelo.
Khusela imithombo yengeniso yangaphandle emitsha (yokufunda, izibonelelo, inkxaso yeeprojekthi ezinkulu) ukuxhasa iziko.
Yakha ngokubhekisele kwikamva ngocwangciso olusebenzayo kunye nomiliselo.
2021 Iklasi (Ixesha liphela ngo-Okthobha ka-2021):
UGillian Cummings-Beck, UMlawuli kuLawulo loMngcipheko, Taylor Morrison
UJerry F. Nichols, uSekela Mongameli oMkhulu, uBrown noBrown IziBonelelo
2022 Iklasi (Ixesha liphela ngo-Okthobha ka-2022):
UMichael Prioletti, uSekela Mongameli oPhezulu, uRobert W. Baird & Co, Inc.
UGerard A. McHale, Omnci, Umnini / Mongameli, uGerard A. McHale, Omnci., PA
UTiffany Esposito, uMongameli kunye ne-CEO, i-SWFL, Inc.
2023 Iklasi (Ixesha liphela ngo-Okthobha ka-2023):
U-Leslie H. King III, uMcebisi woLawulo lwaBucala
UMarisa Cleveland, u-Ed.D, uMlawuli oLawulayo, i-Arhente yeSeymour
UMarilyn Santiago, uMlingane / i-CMO Creative Resin Products, Inc.
UDianne Hamberg, uSekela Mongameli kunye neNkokeli yeSebe, i-BB & T ngoku yiTruist
UJohn Meyer, uMongameli
U-Erica Vogt, uNobhala kunye noNondyebo